US visa types and visa requirements | Resources ka USAHello | USAHello
Ma rabtaa in aad u yimaadeen inay USA? aad ku sugan tahay USA oo aad u baahan tahay in aad bedesho xaaladdaada? Waxaad u baahan tahay fiise Maraykan ah. Read ku saabsan noocyada kala duwan, waxay helaan mid ka mid adiga kuu wanaagsan, oo ay bartaan sida loo codsado.
Waa maxay fiiso?
visa A waa shaabad ama dukumeenti siiyey dal ayaa sheegay in aad loo ogol yahay in ay yimaadaan dalka. Waxay kuu siinayaa oggalaansho joogitaan oo sheegay in inta aad joogto waxaa laga yaabaa in.
Waa maxay noocyada kala duwan ee fiisooyinka ay halkaas joogaan?
USA waxay leedahay noocyo badan oo ka mid ah fiisooyinka, laakiin waxaa jira laba qaybood oo waaweyn.
fiisooyinka Immigrant waxaa loogu talagalay dadka doonaya yimaadaan oo ay ku nool yihiin dalka Mareykanka. Waxaad ka heli kartaa a liiska fiisooyinka waddanka u soo guurey on the Department of website State.
note Muhiim ah: On October 4, 2019, the US president made a proclamation about immigrant visas.
The proclamation says that after November 2, 2019, the USA will not give immigrant visas to people who cannot pay for their own healthcare. Immigrants will have to show they have health insurance or another approved healthcare plan. Waxaad badan oo ku saabsan baran kartaa health insurance in the United States.
The new rule does not apply to refugees, dadka magangalyo doonka ah, ardayda, or people with enough money to pay their own medical bills. Waad awoodaa read the proclamation for more details about the new rule.
on November 3, 2019, a US judge stopped this rule. He said it was unfair because you cannot get health coverage until you are in the USA. The judge said the rule would harm isukeenidda qoyska. We will update this page if there is more news.
fiisooyinka Non-galootiga ah waxaa loogu talagalay dadka doonaya in ay soo booqdaan. Visitors laga yaabaa dalxiisayaal ama xubnaha qoyska booqday. waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in ay yimaadaan oo ay shaqo ama waxbarasho in muddo ah. Waxaad ka heli kartaa a liiska fiisooyin aan waddanka u soo guurey on the Department of website State.
Sidee baan ku ogaan visa US inaad codsato?
Waxay noqon kartaa wareer ah in la ogaado sida loo doorto visa sax ah. Waaxda Dowladda Maraykanka ee Visa Wizard kaa caawin doona. Waxaa ku weydiinayaa xoogaa su'aalo ah oo aasaasi ah, sida Halkee ka timid iyo sababta aad u soo iman doonaan inay USA. Qasab ma aha inaad gasho faahfaahintaada shakhsi ahaaneed. Iyada oo ku xidhan jawaabahaaga, waxay ku tusi doona waxa aad kala dooran yihiin. Noocyada kala duwan ee fiisooyinka leeyihiin warqado si ay u aqoonsadaan.
Sida loo codsado fiisaha US a
First, dooran fiisada aad ka u baahan tahay State.gov liiska. Dooro link soo socda in nooca fiisada. link wuxuu noqon doonaa warqad ama warqado iyo inta badan dhowr, aad - tusaale ahaan J ama link H1-B.The idiin qaadan doonaa in a faahfaahinta bogga iyo tilmaamaha fiiso in.
Marka aad dooran link si aad u codsato fiisaha muhaajiriinta, aad ka tagi doono website-ka Department of State iyo aad shabakadda internetka ee Citizenship and Immigration Services Maraykanka.
Sponsor State of dalalka Argagixisada
USA ayaa ku dhawaaqay afar dal in ay maal-state of argagixisada. USA ayaa sheegay, kuwaas oo afar dal caawin argagixisada. Waxay yihiin: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee dadka reer Korea (Kuuriyada waqooyi), Iran, Sudan, iyo Suuriya. Haddii aad tahay muwaadin ah oo mid ka mid ah afarta dal, waxaad yeelan doontaa in la waraystay
Barnaamijka dhaafitaanka visa US
wadamada qaarkood waa qayb ka mid ah Maraykanka Barnaamijka ka Reebidda Visa. muwaadiniintooda uma baahnid fiiso inuu yimaado USA. Halkii soo booqda waa in uu helaa ogolaansho iyada oo loo marayo barnaamij la yidhaa System Electronic Travel for Authorization (THIS). Waxaad ka dalban kartaa yiraahdo haddii aad tahay muwaadin u dhashay mid ka mid ah dalalka iyo haddii aad ayaa u imanaya USA ee 90 maalmood ama wax ka yar ee ganacsiga ama dalxiis ah.
Your foomka codsiga fiisaha ku weydiin doonaa inaad keento macluumaadka warbaahinta bulshada. Waxaad badan oo ku saabsan baran kartaa sababta dawlada Maraykanku ku doonayo in la ogaado oo ku saabsan warbaahinta bulshada iyo waxa ay qabato macluumaadka.
note Muhiim ah: visa A ma damaanad galay Maraykanka entry. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u safartid USA, laakiin aad waxaa laga yaabaa in weli la diidi albaabkeedu ku ag Customs Mareykan ah iyo Ilaalinta Xuduudaha (CBP) socdaalka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan gelitaanka USA.
xaaladda kale visa US
Waxaa jira qaar ka mid ah qaybaha kale ee waddanka u soo guurey oo innaba midna aan waddanka u soo guurey, sida ciidanka, ama dadka hesho daaweyn caafimaad. Waxaad ka akhrisan kartaa qaybaha kale visa.
deganaanshaha joogtada ah
Haddii aad qabto wax visa ah waddanka u soo guurey, waxaad qaadan kartaa tallaabada xigta iyo codsan in ay noqoto dagane joogto ah. Noqoshada joogtada ah ee USA ka degan yahay geedi socod dheer, laakiin dadka haysta fiisada badan waxay xaq u leeyihiin. Baro wax badan oo ku saabsan noqoto dagane joogto ah iyo helitaanka kaarka cagaaran.
Dadka qaarkood u yimaadeen inay USA si uu u doondoono ilaalinta. Waxay waxaa laga yaabaa in loo ogol yahay inay soo galaan ama joogaan sida:
TPS ama haysta DED
Baro badan oo ku saabsan barnaamijyada bani'aadamnimada in u oggolaan in dadku ay ku noolaadaan ee USA.
dukumentiga safarka ee qaxootiga iyo xuquuqda
barnaamijka lottery visa kala duwanaanta
isukeenidda qoyska - USA keena Ehelkiinna
Sida loo dalbado magangalyada
aasaaska Visa ka Travel.state.gov
Ogow warbixin xuquuqda ka IRAP dadka dhowaan yimid-markii ugu horeysay ee USA
Macluumaadkan waxaa diyaar inuu kaa caawiyo inaad garan fiisooyinka. Waxaa ku salaysan macluumaad ka US State Department iyo Adeegyada Socdaalka Mareykanka iyo Jinsiyadda. Waxaa la simay inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.